Abaphathi Abaphethwe kanye Nabaqondisi Benkonzo
Isevisi Yobumfihlo Yegama
Ngaphezu kwezinhlelo zeHhovisi (ezaziwa nangokuthi Uhlelo Lamahhovisi Ahlanganisiwe), Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikeza insizakalo eyingqayizivele ukukunikeza ungqimba olungeziwe lwe-BIG lobumfihlo nokuvikelwa. Ukuze uvikele amaklayenti ethu ezinhlotsheni zamehlo, Izinkampani Ezihlangene zinikeza ezethu Inkonzo yamagama. Lapho ubhalisela le sevisi, sizokwabela omunye wabahlanganyeli bethu ukuthi akusimamele njengezikhulu nabaqondisi benkampani yakho. Le nsizakalo iyatholakala ngeNevada neWyoming Corporations, futhi inikezwa ngo- $ 500 kuphela ngonyaka. Lowo oqokiwe kanye neLegal Shield Programme lapho ophakanyisiwe wethu esiza ngezinto ezihlanganisiwe yi- $ 1995 kuphela ngonyaka.
Lapho kuqokwa isikhulu noma umqondisi oqokiwe, wena (ungumnikazi weningi lesitoko) ungahlala ulawula ngokuphelele ibhizinisi lakho. Unawo wonke amalungelo okusayina ngaphezu kwanoma iyiphi i-akhawunti yezimali, ugcina ilungelo lokufaka noma yiluphi uhlobo lwezezimali noma uhlelo lokuqashisa nanoma yiliphi elinye ibhizinisi, njll. Njengabaningi be-stockholder, unga, noma ngasiphi isikhathi, uvote abaphathi abaqokiwe kwinhlangano. uma ukhetha kanjalo. Ngaphezu kwalokho, njengoba kushiwo ngenhla, ugcina wonke amalungelo okusayina kuwo wonke ama-akhawunti asebhange- izikhulu zakho eziqokiwe zeNkampani ayihlanganisi noma yiziphi izimali ezihambisana nenkampani ngoba azinakho ukufinyelela noma igunya lokusayina kunoma iyiphi i-akhawunti yebhizinisi. Zimane zilondoloze ubumfihlo bakho ngokugcwalisa izidingo ezingokomthetho zenkampani yokuba nesikhulu esisodwa noma ngaphezulu esisohlwini.
Imvamisa, amaklayenti ethu a-oda i-Corp, Programme Office Corporate kanye ne-Nominee Service ndawonye njengephakethe. Ukusungula i-Corporate ne-Corporate Office Program kanye ne-Nominee Service, vakashela isikhungo sethu sama-oda esivikelekile.